Tallaabooyinka Dowladda hoose ee Norrköping oo xiriirka la leh adkaynta talo-siinta guud - Norrkoping
Tallaabooyinka Dowladda hoose ee Norrköping oo xiriirka la leh adkaynta talo-siinta guud
Publicerad 11 november 2020 09:33
Maalintii khamiista oona taariikhda ku beeganayd 29 oktoobar, waxay Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten], wadajir Maamulka Gobolka Östergötland iyo Golaha Gobolka Östergötland go'aan ku gaareen in talo-siinta gobolka aad loo adkeeyo. Dowladda hoose ee Norrköping waxay iyadoo la xiriirinayso adkaynta talo-siinta guud, go'aamisay in xaaladda tallaabooyinka hoos ku xusan laga qaado.
Adkaynta talo-siinta guud waxay saamayn ku yeelan doonaan dhaqdhaqaaqyada Dowladda hoose:
Dowladda hoose waxay hadda talo ahaan soo jeedinaysaa in, marna aan la booqan guryaha gaar ahaan waayeellada iyo dadyowga la dhiban cudurrada waxyeela awoodda xusuusta degan, iyo kooxaha kale iyo kuwa ku nool guryaha adeegyada leh [serviceboende].
Albaabada maktabada waa laga xiray dadwaynaha, laakin waxaa suuraggal noqon karto in xaaladaha qaarkood la qaabilo kooxaha ilmaha ee ballanka qabsaday.
Sidoo kale waxaa dadwaynaha laga xiray albaabada madxafyada [Norrköpings Konstmuseum iyo Norrköpings Stadsmuseum] iyo [Visualiseringscenter]. Sidoo kale, waxaa la ciribtiray dhammaan dhacdoonada sida barnaamijyada, bandhigyada iwm.
Waxaa kaloo dadwaynaha laga xiray albaabada dhammaan goobaha lagu dabaalado. Xitaa kuwa aan sidaas u waynayn u ku yaalaan dibada degmooyinka – sida [Råsslabadet, Åbybadet iyo Skärblackabadet] in laga kireyn karo oo keliya. Goobaha lagu dabaalado waxaa albaabada loo furi doonaa oo keliyaa kuwa iskuullada iyo ururrada oo xiriirka la leh kooxaha da'dooda ku xusan talo-siinta.
Dhaqdhaqaaqyada Goobaha wakhtilummiska habeenkii albaabada ayaa loo xiraya.
Ku saabsan kireysashada goobaha isboortiga, waa in la tixgeliyaa qodobada talo-siinta guud. Taasoo macneheeda tahay, in laga kireyn karo oo keliya dhaqdhaqaaqa isboortiga ee la hirgelin doono oo loogu talagalay, ilmaha buuxsaday 15 sano (2005) ama da'dooda ka yar.
Dadwaynaha waxaa laga xiray albaabbada goobaha ciyaaraha barafka, xitaa kuwa dadwaynaha
Iskuulka dhaqamada [Kulturskolan] wuu furan yahay, laakin casharrada waa la xadadeeyay waxaana loogu talagalay ilmaha buuxsaday 15 sano (2005) ama da'dooda ka yar.
Albaabada ayaa loo xiray Xarunta arkifiyada qaranka [Stadsarkivet], laakin dokumentiyada laga dalbaday waa laga soo qaadan karaa kaddib markii khadka taleefanka 011-15 11 75 ama email stadsarkivet@norrkoping.se
Xarunta xiriiryada [Kontaktcenter] way furan tahay, laakin hoos u dhigida cudur-faafinta awgeed waxaa dadwaynaha lagula talinayaa in aynan booqan xarunta. Halka booqashada waxaa xarunta lagala xiriiri karaa khadka taleefanka 011-15 00 00 ama email kommun@norrkoping.se
Go'aankii Golaha Gobolka ee berri hore ee xiriirka la lahaa tirada aan 50 qof ka badnayn oo degmada Norrköping hal goob isugu iman karo waxba lagama beddelin. Taasoo macnaheedu tahay in weli aan albaabada loo xirin [Cnema] iyo [Louis de Geer], iyadoo laakiin la tixgelinayo xaddidaadaha ka hirgaleen.
Adkaynta talo-siinta guud ee hirgashay waxay ansaxsan tahay ilaa 19 nofeembar. Dowladda hoose ee Norrköping waxay hab taxadarsan ula socotaa horumarka xaaladda xiriirka la leh fayruuska [Corona]. Waxaana la rajaynayaa in goor dhow albaada loo furo dhaqdhaqaaqa imminka albaabada laga xiray. Haseyeeshee, waxaa muhim ah ogaanshaha in muddo kororsi lagu sameeyn karo talloobinka imminka xaaladda laga qaaday. Tan kale, waxaa dhici karto in Dowladda hoose ay go'aamiso tallaabooyin dheeraad ah. Qododbadaan waxay khuseeyaan hawlwadeneyada dhaqdhaqaaqyada Dowladda hoose:
Waa in layska ilaaliyaa ama laga weecda kulamada shaqsiyeed. Haddii ay suuraggal tahay waxaa lagu wada kulmi karaa iyadoo la adeegsanayo farsamada digitalka. Haddii loo baahdo kulan shaqsiyeed, waa in lagu kulma goob la xajin karo kala fogaanshada. Xilliga kulan waa in marna la abuurin xaalad ciriiri sababi karto.
Hawlwadeneyada waxaa lagula talinayaa in hawlaha shaqada ay ku dhaqaaqaan iyagoo guryahooda ku sugan. Waa haddii ay suuraggal noqon karto. Ulajeedada waxay tahay in hoos loo dhigo heerka faafinta cudurka. Suuragelideeda waa arrin ku xiran baahida dhaqdhaqaaqa iyo nooca hawlgallada. Waa in arrinta lagala tashada madaxa mas'uulka ah.
Waa in tababarrada, shirarka, dhacdooyinka iyo kulamada shaqada oo lagamamaarmaanka ah lagu hirgeliyo iyadoo la adeegsanayo farsamada digitalka. Haddii tababarrada, shirarka, dhacdooyinka iyo kulamada shaqada aan lagu hirgelin karin iyadoo la adeegsanayo farsamada digitalka waa in hirgelintooda dib loo dhiga.
Dhammaan dhaqdhaqaaqyada Dowladda hoose, oo bulshada muhim u ahayn waxaa laga yaaba in albaabada loo xiro, ama la xadadeeyo saacadaha ay furan yihiin ama xad loo yeelo tirada dadka goobaha islamar ku sugnaan karaan.
Sababta xad loogu yeelayo goobaha dhaqdhaqaaqyada Dowladda hoose waxaa weeyaan in hoos loo dhigo heerka faafinta cudurka. Waxaa dhici karto in wax laga beddelo saacadaha goobahaas ay furan yihiin ama beddelka booqashooyinka la adeegsado farsamada digitalka ku salaysan. Nidaamka noocaas waxaa ka reeban goobaha booqasho/kulanka awgiis looga baahan yahay in qofku u booqdo.
Socdaallada shaqada waa in la joojiyaa ama dib loo dhiga. Haddii hawlwadenaha u ka qaybgeli doono kulan, lagu qaban doono goob kale waa in hawlwadenaha u gaadiid ahaan adeegsada baaskiil ama goobta u lugeeyaa. Wuxuu kale isticmaali karaa baabuur u maamulka leeyahay. Waa in usan marna adeegsan gaadiidka guud.
Tallaabooyinka kale ee la qaadi karo:
Maamulka Waaxda arrimaha raashinka ee Xafiiska arrimaha bulshada [Livsmedelsenheten ee samhällsbyggnadskontoret] wuxuu kordhin doonaa kormeerida dhaqdhaqaaqyada makhaayadaha.
Maamulka waaxda is-gaarsiinta ee Xafiiska Golaha Degmada, wuxuu kordhin doonaa heerka warbixinta ee hawlwadeneyada, dadwaynaha iyo booqashayaasha loogu talagalay.
Iyadoo loola xiriirinayo talo-siinta guud ee la adkeeyay, wuxuu maamulka Dowladda hoose Norrköping, hawlgeliyay maamulka musiibada, taasoo ulajeeddada tahay in hab dhaqsi badan wax ka qabtaan baahida iyo ku gaari karaan go`aanada lagamamaarmaanka ah ee dhaqdhaqaaqyada lagu taageero.